nepali pron: भाउजु सँग चिकाचिकी
भाउजु सँग चिकाचिकी
मेरो सेक्स stories अली भिन्नै छ। म आज मेरो लाईफ मा घटेको 1st सेक्स stories भन्न गैरहेको छु। मेरो घर काठमाडौं हो। यो सेक्स stories मा र टाढा को नातेदर पर्ने मेरो भाउजु को हो। मा सानै देखी भाउजु सँग जिस्किने गर्थे . म 17 बार्श को थिए। मैले हस्थ मैथुन पनि गर्न सुरु गर्थे । 1 दिन म भाउजु को कोठा म गएको थिए भाउजु को कम्मर भन्दा ko अली कती अगाडि को वाग थोक्किएको रहेछ पछाडि पत्ती को र मलाई मालिश गर्दिनु भनेर आउनु भन्यो र म पनि एही chance मा थिए . मैले पनि हुन्छ भने र म मलिश् गर्न थाले म भाउजु को धाद मालिस गर्ने बहना मा मजा लि रहेको थिए। मा भाउजु को धाद सुम्सुम्यौदै थिए . कारीब 10 मिनट को मालिश पछी भाउजु ले पुग्यो भन्नु भयो र मैले मालिश गर्न छोडे। अनी तेस्को 1 दिन पछाडि मेरो दाई पर्ने काम को सिल्सिला मा6महिना को लागि बहिर जानु भयो। म सधैं भाउजु को मा जन्थे अली अली जिस्किन्थे। म भाउजु लाई फुर्कौने गर्थे। तपाईं राम्री हुन्हुन्छ। तपाईं को जिउ दाल मिलेको छ कम्मर चेस्त सब मिले को छ भन्थे। तपाईं त सेक्सी हुन्हुन्छ भनेर 1 दिन भनिदिए। भाउजु ले मलाई च्या कस्तो मात्तेको भनेर भन्नु भयो। 1 दिन भाउजु र म जिस्किदै थियौ। मैले हल्फ पन्त लगाएको थिए र अन्देर्वेर पनि लगाको थिएन। भाउजु मेरो काख माथि आएर बस्नु भयो। मेरो लादो ठन्कितेर थादो भाईरको थियो त्यो भाउजु ले स्पर्श गर्नु भयो र भन्नु भयो अंमा कती ठुलो। म सँग गर्ने हो। म लाज ले भुत्तुक भाये र खुशी ले गम्मक भए। म हुन्छ भनेर घर गए।
म घर म साथी को birthday छ राती साथीको मा नै सुत्छु भनेर आए र भाउजु को मा आए। अनी मैले भाउजु लाई सोधे अगी तपाईंले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो त? भाउजु ले सुनेको नसुनेको जस्तै गर्नु भयो। भाउजु ले मक्सी लगाउनू भको थियो। अनी मा भाउजु तिर गय भाउजु पनि म तिर आउनु भयो। मैले १कै चोटि म भाउजु को दुध म हात राखे, भाउजु ले त ब्र लगाउनू नै भाको रहेनछ। तेस पछी म दुदु मदँ थाले अनी मेरो हात पूतो मा बध थालयो। भाउजु ले त panty पनि लगाउनू भाको रहेनछ। भाउजु पुर तयारी मा हुनु हुदो रहेछ।
तेस पछी मा मेरो लादो भाउजु को पुती मा चिरएको मात्र क् थिए मेरो फुशी झर्यो। कारीब १घन्त को बिस्रम पछी मल फेरी भाउजु कङ सेक्स गर्न थाले र कारीब3मिनट पछी मेरो फुशी झर्यो। भाउजु र मैले रात भरी मा चार चोटि सेक्स गर्योउ।
र हामी ऐले टाईम मिल्यो कि सेक्स गर्छौ। मैले ऐले सम्मा भाउजु लाई १३७ चोटि सेक्सगरिसके।
Posted by nepali pron at 2:43 PM